कक्षाहरू लागि दर्ता - को USAHello कक्षा मुक्त अनलाइन कक्षाहरू
हामीलाई थाहा छ तपाईं सफल हुन सक्नुहुन्छ!
हाम्रो कक्षाहरू मुक्त छन् त्यसैले तिनीहरू सबैलाई खुला हुन सक्छ. तपाईंले आफ्नो नाम वा आफूलाई बारेमा कुनै जानकारी दिन छैन.
हामी आफ्नो प्रगति बारेमा इमेल पठाउने. यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने हामीलाई तपाईंले इमेलहरू पठाउने रोक्न, तपाईं हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ. हामी आफ्नो इमेल ठेगाना केहि लागि प्रयोग गर्न वा अरू कसैलाई दिनुहुनेछ.
सुरू गर्न, लग - इन वा खाता सिर्जना
तपाईं साइन अप गर्न एउटा इमेल ठेगाना प्रयोग गर्न आवश्यक हुनेछ. आफ्नो इमेल ठेगाना तपाईं आफ्नो खातामा लग इन गर्न अनुमति दिन्छ. तपाईंको खातामा, तपाईं पाठ ट्रयाक राख्न र तपाईं पूर्ण क्विज गर्न सक्नुहुन्छ.
Facebook संग साइन अप
Google संग साइन अप
वा यहाँ साइन अप
पासवर्ड पुन: लेख्नुहोस*
के तपाईं यो कक्षा पूरा गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ
-- हो होइन, मँ हेर्दै छु पक्का छैन अन्य
तपाईं यो कक्षामा किन रुचि राख्नुहुन्छ
म अनलाइन मन पराउँछु जब मसँग समय हुन्छ म यो कक्षा लिन सक्छु व्यक्ति कक्षामा भाग लिन मसँग बच्चाको देखभाल छैन कोभिड यो नि: शुल्क छ म अर्को भाषामा अध्ययन गर्न चाहन्छु एक जना साथीले मलाई कक्षाको बारेमा बताए आप्रवासी उद्देश्यका लागि अन्य
यो जानकारीले हामीलाई हाम्रा विद्यार्थीको आवश्यकताहरू बुझ्नको लागि मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंको कक्षामा असर गर्दैन।
यो साइट साइन अप गरेर, तपाईं भण्डारण र प्रति रूपमा USAHello गरेको प्रयोग भइरहेको आफ्नो व्यक्तिगत डाटा सहमत गोपनीयता नीति. यदि तपाइँसँग साइन अप गर्न कुनै समस्या छ भने कृपया हामीलाई थाहा दिनुहोस्. classroom@usahello.org